Ifilimu yokuqala yoopopayi yeoyile kubomi bukaVan Gogh | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UVicent Van Gogh ugqwesile ngexesha lakhe, ukufikelela kwezi ntsuku ngendlela, apho amthubi, ii-violets kunye noluhlu olunamandla lweetoni qhubeka ukufunyanwa njengenye into eyahlukileyo kwaye kubonakala ngathi ixesha alidluli phambi komsebenzi wakhe ngamnye.
Kulo nyaka sinako Dibana kwakhona nomzobi omkhulu waseDatshi kwifilimu yokuqala yoopopayi ipeyintwe ngokupheleleyo kwioyile. Iipeyinti ezili-100 zazifuneka ukwenza oopopayi kwizakhelo ezili-12 ngomzuzwana. Inkqubo yoopopayi yokwenza iprojekhthi yeminye yemisebenzi yakhe edumileyo kwifilimu eya kukhutshwa ngaxa lithile enyakeni.
«Ukuthanda iVincent luphando oluqhubekayo ebomini kunye neemeko ezingaqhelekanga zokufa NguVicent Van Gogh, omnye wabapeyinti abathandekayo emhlabeni, ngemizobo yakhe kunye nabalinganiswa abahlala kuzo«, Ubalisa isishwankathelo sefilimu.
Ekhokelwa nguDorota Kobiela kwaye yenziwa ePoland, banazo kufuneka iipeyinti ezili-100 ukwenza le bhanyabhanya yoopopayi eza kukhutshwa kulo nyaka. Itreyila iyafumaneka ngoku kwaye uyayibona entlokweni engaphezulu kwale migca ukubona uVan Gogh ngokwakhe ejikela kwisampulu yoopopayi ebalaseleyo.
Umceli mngeni kwabo 100 abazobi banazo ipeyintwe ngeoyile nganye yesakhelo equlathe u-Vincent. Umceli mngeni wokuzisa imisebenzi yeklasikhi yalo mdwebi mkhulu waseDatshi ebomini kukuhamba ngumceli mngeni omkhulu kwaye ekufuneka uhlonitshwe ukuze ungaphazamisi kuwo.
Kwimifanekiso ungabona abapeyinti abohlukeneyo ngepeyinti yabo kunye neseyile enkulu yesakhelo esinye. A Umsebenzi ofanele ukunconywa Kuthatha iiyure kunye neeyure zokupenda. Ukuba sele kuyabanzima xa usenza umzobo, ukupeyinta isakhelo ngasinye kufuneka kube yinto engakholelekiyo.
Unelkwiwebhu y Facebook ukulandela iphambili.
Ngokuchanekileyo i UVan Gogh Museum wapapasha uninzi lwemizobo yakhe kwifomathi ye-HD kwaye kutshanje sabelane isindululo sobugcisa sokuzisa igumbi ukusuka komnye wemizobo yakhe edumileyo ukuya kwinyani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Uthanda uVincent, umboniso bhanyabhanya wokuqala opeyintwe ngokupheleleyo kwioyile
Ubunqunu bobugcisa bukaPeter Coulson